Sameesida Websaydh yada - Ganacsi Group
Kooxda Ganacsi Group waxay kuladiyaartahay ganacsiga internetka iyadoo kuu suurta galinayso inaad kordhisid iibinta alaabtaada. Ganacsiga internetka (ecommerce) waa teknoolajiyada ugu hurmarka badan iibinta alaabtaada macmiilkaaga oo jooga wadan kale ama magaalo kaafog.
Ganacsiga internetka waxa kahelli kartaa soo saarid balaarin dhinaca ganacsigaaga iyo xiriir macmiil badan.
SAMEESIDA WEBSAYDHKA WARARKA
Hadii aad tahay urur soo saare wararka sida raadiyaha, telefishanka, warqadaha wararka iyo wm, waxaa kuudiyaar ah websaydh aad kubaahin kartid wararka si aad u gaarsiisid dhageestayaal ama aqristayaal badan.
Hadii aad tahay qof jecel qoraalada iyo soo bandhiga fikradooyin kaaga, waxa heli kartaa websaydh kuu awood galinaayo soo bandhiga fikradahaaga shaqsi si aad u gaarsiisid dadka ama shacabka aad isku fikrad tihiin.
Waxaa kale oo aad kaheli kartaa wada sheekeesi kusaabsan fikradahaaga iyo is waydaarsi aqoon.
MAQALKA IYO MUUQAALKA
Kooxda Ganacsi waxay diyaar kulatahay websaydh yada aad soo bandhigi karto cododka iyo muqaalada. Websaydh yada waxaa loosameeyay hab ugooni ah maqalka iyo muqaalka si macmiishaada ay kaga faaiideystaan si fudud.
Dalbo Sameesid Websaydh
Email kaaga (required)
Websaydh warar Websaydh blog shaqsi Websaydh ganaciga internetka Websaydh Maqal ama Muqaal Websaydh Kale